တမန်​​တော်​မြတ်​နှစ်​သက်​စရာများ | Danya Wadi
Posted by danyawadi on January 6, 2016 in သူ့အကြောင်း, အစ္စလာမ်ဘာသာ
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)တစ်နေ့ ဆွဟာဗဟ်များရဲ့ထံကို လာပြီး…ဟဇရသ်အဘူဘကရ်(ရဒွေ)ကိုမေးတယ်…
အိုးအဘူဘကရ် ဒွန္နယာမှာ သင်သည် ဘယ်အရာ ကိုနှစ်သက်လဲ?..
၃။မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ကိုယ်တော်မြတ်ပေါ်မှာပဲ အသုံးပြုချင်ပါတယ်…
အိုးအိုမရ်သင်ဖက်ကကော ဒွန္နယာမှာဘယ်အရာတွေ ကိုနှစ်သက်သလဲ?…
၁။တိုးတီးစွာဖြစ်နေရင်လဲ ကောင်းမှုဖက်ကိုညွှတ်ကြား ချင်ပါတယ်..
၂။လူအများရှိနေပါစေ သူတစ်ပါးကိုမကောင်းမှုမှာတား နေချင်ပါတယ်…၃။အမှန်တရားကိုပဲပြောချင်ပါတယ် နားထောင်တဲ့သူနားခါးနေပါစေ…
ပြီးတော့တမန်တေယ်မြတ်(ဆွ)က ဟဇရသ်အွစ္စမားန် (ရဒွေ)ကိုမေးတယ်..အိုးအွစ္စမားန်သင်ဖက်ကရော ဒွန္နယာမှာဘယ်အရာတွေကိုနှစ်သက်စေလဲ?..
အိုးအလီသင်ဖက်ကရော ဒွန္နယာမှာနှစ်သက်စရာ ဘာတွေလဲ?ဟဇရသ်အလီ(ရဒွေ)ဖြေတယ်..
၂။ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ရိုဇာထားရတာကို…၃။ရန်သူများကို ဓားဖြင့်တိုက်ခိုက်ရတာကို…
ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်(ဆွ)က ဟဇရသ်အဘူဇရ် ဂေဖာရီ (ရဒွေ)ကိုမေးတယ်..သင်ကောဒွန္နယာမှာ ဘယ်အရာများကိုနှစ်သက်လဲ?..
၃။သေခြင်းတရား..တမန်တော်မြတ်က ဟဇရသ် အဘူဇရ် ဂေဖာရီ(ရဒွေ)ကိုမေးတယ်..ဘာကြောင့်ဒီအရာတွေကိုနှစ်သက်ရသလဲ?..
၄င်းစာလောင်ခြင်းကြောင့် ကျွန်တော့နှလုံးသား နူးညံ့သွားလိမ့်မည်..
နေမကောင်းခြင်းကိုဤအတွက်ကြောင့်နှစ်သက်ပါတယ်..၄င်းမကျန်းမာခြင်းကြောင့် ကျွန်တော့ရဲ့ဂိုနဟ်များ လျော့နည်းပြီးမားဖ်ဖြစ်နေမည်…
၄င်းသေခြင်းတရားကိုအကြောင်းခံပြီး အရှင်မြတ်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရမည်…
သင်တို့ရဲ့ဒွန္နယာကနေ ငါကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)ကို သုံးခု သောအရာကို နှစ်သက်စေပါတယ်..
၃။ငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ မျက်စ်ိရဲ့အေးမြခြင်းကို နမားဇ် မှာထားထားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်…
ပြီးတော့ ဟဇရသ် ဂျိဗ်ရာအီးလ်(အ)ရောက် လာပြီး ပြောတယ်….သင်တို့ရဲ့ဒွန္နယာကနေ ငါ့ကို သုံးခု သောအရာကိုနှစ်သက်စေတယ်…
ပြီးတော့ဟဇရသ်ဂျိဗ်ရာအီးလ်(အ)က မိုးကကောင်းကင် ပေါ်သို့သွားလိုက်တယ်..ပြီးတော့တဖန် ဒွန္နယာမြေပထဝီ ကိုလာပြီး..တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကိုပြောတယ်…
အလ္လာဟ်သအာလာက ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)ကို စလာမ်ပေးခဲ့ပါတယ်..
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သင်တို့ဒွန္နယာလောကကနေ သုံးခုသောအရာကိုနှစ်သက်ပါတယ်….
၁။သင်တို့ရဲ့နုတ်လျှာမှာ အလ္လာဟ်ကိုသတိရပြီးစွတ်စိုနေခြင်း ဆိုလိုတာက အလ္လာဟ့်ကိုသတိရတမ်းတပြီး ဇိကိရ်လုပ်နေတဲ့ နုတ်လျှာ….
၃။အခက်အခဲဒုက္ခနှင့်အရှင့်မြတ်ရဲ့စမ်းစစ်မှုကို သီးခံနိုင်ရည်ရှိသော ခန္ဓာကိုယ်…
ကျွန်တော်တို့တွေယူတတ်မယ်ဆိုရင် အတုယူပြီး သင်ယူရမယ့် အရာတွေက အများကြီးရှိပါတယ်…
အလ္လာဟ်သအာလာအားလုံးကို ကောင်းသော အစားပေး တော်မူပါစေ…
← တရုတ်​က​မြေမြှုပ်​မှိုင်းအတွက်​တရားဝင်​ ကန့်​ကွက်​
ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်မဲ့လည်ပင်းရှည် ပဒေါင်း အမျိုးသမီး →